lokusungula Marc Chagall sika ongaqhathaniswa yonke, ngoba izinhlamvu imidwebo yakhe ojikelezayo kusuka omunye wobuciko kwenye, bese bezithola kunezimo ezingavamile. Futhi umculi ngokwakhe esaphila wake walinga yini ukuhamba nxazonke zezwe lonke ukwazi ukwehlukana kwayo. Exposure lezi imidwebo emangalisayo kungabonwa eYurophu nase Melika. Nokho, i-National Marc Chagall Museum e Nice, izithombe ongawabona ngezansi, iyiqoqo elikhulu kunawo wonke imisebenzi yakhe.
Kuyini Museum ezithakazelisayo of the edumile?
Ukuvula ukuthi wazalwa ngo-1973, lapho umculi wayesaphila. Ngesisekelo ukuqoqwa 17 imidwebo thematic okuqondene uchungechunge "Umyalezo zeBhayibheli". Futhi kuhlanganiswe imisebenzi yenkolo-ezinezihloko ezingaphezu kuka-300 - benjalo isinyathelo kahle phezu kwezinye zilindele base sewebhu. Phakathi imidwebo kukhona imidwebo, imidwebo, aqoshiwe, umbhalo, lithography, efekethisiwe, ithusi amabhodi esibaziweyo, isebenza amafutha kanye gouache. Marc Chagall Museum unezela eqoqweni layo kuze kube manje, njengoba umculi ngokwakhe wathatha ukuhlanganyela ngenkuthalo umhlangano walo - wanika imidwebo yakhe kuze kube sekupheleni kokuphila.
Isithombe ukuthi bakhuluma ngezilimi
lokusungula Marc Chagall akusilula ukuqonda. Anakho zinendlela kwezobuciko, imidwebo benamandla Motifs kokuqukethwe wenkolo nefilosofi, kukhona kungabhekisela (Amacebo) ukuze siqu empilweni yakho. Nakuba eziningi imisebenzi umculi abonakala ezingafinyeleleki bezibona, kodwa Marc Chagall Museum kakhulu bakhangwa imfihlakalo yayo Ongoti yobuciko. Futhi sizama ukucabanga, ukubonakalisa emidwebweni yakhe.
Umjikelezo wokuqala "Umyalezo zeBhayibheli" lesikhumbuzo e 1966 ngesikhathi Louvre, ngemva kwalokho umculi wanika Umdwebo kuHulumeni French. Umngane Marc Chagall futhi uNgqongqoshe wezamaSiko Andre Maldro ngaphambilini ukudala ngabo ehlukile Museum eziyinkimbinkimbi.
Imidwebo zezikhonzi zenkolo Marc Chagall zisendaweni ebalulekile, futhi umjikelezo kubonakala ngokugcwele. Abazali umdwebi esizayo abazinikele, ngakho lo mfana sikuqaphela ngokugcwele okushiwo yobuJuda. Imifanekiso ngoba iBhayibheli, waqala ukudala ekuqaleni, kodwa kuphela emva kwempi yezwe yesibili, zenkolo isihloko imidwebo yakhe wathola ukuthuthukiswa okukhulu.
Chagall "Umyalezo zeBhayibheli" wakhela ku-yalolucwaningo 50 XX leminyaka, ukusebenza edolobheni Vence (France). Lo mjikelezo kwaba okukhulelwa isenzo sokuthikameza ukuvuselelwa esilitshelwe futhi ezingenalutho yesonto kumaKatolika. Kodwa sesisondele ekupheleni ohambweni lokuphila, umculi nomuzwa wokuthi izithombe eziba umphumela kuyizipho jikelele orientation neyobuntu. Ngakho wanquma ukunikela ukuba uhulumeni waseFrance.
Uchungechunge lwemfundo izingxenye ezimbili: imidwebo nambili. bangabaphingi bonke imifanekiso izahluko zeBhayibheli "Genesise" futhi "Eksodusi." Zifanekisela izikhathi yisakhiwo sodumo ubuhlobo kaNkulunkulu nabantu. Kuvele iqiniso elithakazelisayo ngale izinqumo Chagall indawo imidwebo igalari. Yena ngamabomu benqaba ngokulandelana kwezenzakalo, esikhundleni sako ulethe ukuvumelana esisemthethweni nakwezenkolo.
Ukudweba "ukudalwa komuntu"
Marc Chagall Museum igcina isithombe ehholo elikhulu, njalo ikhanga izivakashi - "The Creation of Man". Ekuqaleni, umculi babehlele ngiyibeke phezu kwe-altare yesonto, yingakho ngokucacile kangaka kuyofikwa amacebo amabili, okuhambelana ngokugcwele izingoma altare - wasezulwini kanye lasemhlabeni. Ingxenye engezansi ibonisa ingelosi, sithwele izingalo ka-Adamu, owayesanda nje sebehoxisiwe ekubeni emajukujukwini olwandle eyinhloko, wahlala khona kanye nezilwane. Ekhoneni eliphezulu kwesokudla libonisa ilanga, azungeze okuyinto kunabantu - ngakho umculi ababengayicabanganga ngesikhathi ukuphila okuvamile abantu abavamile abangamaJuda. Ubonisa uJesu esiphambanweni umJuda onguye ngokusobala, walahla sokuhlushwa senimbuso munye.
Marc Chagall Museum iqukethe ngaphakathi kwezindonga zawo iphepha esithi "Umhlatshelo ka-Isaka", okukhombisa yesehlakalo ezivela eBhayibhelini, lapho u-Abrahama wayehamba ukuba anikele ngendodana yakhe. Iwebhu, njengoba kwaba njalo endabeni langaphambilini, ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili: phezulu esibhakabhakeni ikanye nezingelosi ephakeme, ezansi scene esabekayo. Izibalo kuphela eshiwo izinhlamvu endleleni ngokumelene isizinda nezimagqabhagqabha enkulu umbala esinika indaba umuzwa othile. On the blue ingelosi - ke zonke lezi zilo sifanekisela izwi likaNkulunkulu, khona livela ezulwini. Ekhoneni eliphezulu kwesokudla ibonisa indaba atholakala eBhayibhelini mayelana nokuthi ukuhlupheka inzalo ka-Abrahama, umculi awakhumbuze njalo. imidwebo yakhe Avame ukutholakala izingcezu zomama abanabantwana, kanye izigcawu ukuhlupheka uKristu obethelwe esiphambanweni kuka Chagall ligxile ubunzima ngembobo abantu bamaJuda. Ingxenye engezansi isithombe sikhombisa zikakhukhulelangoqo ilangabi lapho evamile kukhona Abrahama no-Isaka.
Umqondo jikelele imidwebo emibili, ngokuvumelana umbono ka Chagall, - kwakuwukuthi ngabanye kuNkulunkulu. Ngaphezu kwalezi, nezinye izindwangu kuyinto Marc Chagall Museum e Nice.
Kanjani ukuze uthole Museum?
Ukuze uthole kuwo, ufuna ukwenza uhambo umuzi odume iMedithera. Marc Chagall Museum e Nice has ikheli elandelayo: 36 avenue Docteur Ménard. Intengo ye-ithikithi for embukisweni unomphela 6.5 euro ukuvakashela nemibukiso unomphela futhi yesikhashana, udinga ukukhokha 7.7 euro. Marc Chagall Museum e Nice, amahora okuyinto kusukela November kuya April ukusebenza - kusuka amahora 10 kuya 17, futhi kusukela ngo-May kuya Okthoba - kusuka amahora 10 kuya 18, kungabuye wavakashela mahhala. Lokhu kwavumela abangasebenzi, abafundi nezingane ezingaphansi kweminyaka engu-18. NgoLwesibili, i-Museum akusebenzi, ngempelasonto kanye namaholide yilezi: 1 Januwari 1 Meyi, 25 Disemba.
Ngo Akumangalisi okwakuthandelene Jewish isiko kanye ezintsha imibono umculi lasendulo. Wayephila eside (cishe iminyaka engu-100) futhi ithele ukuphila, ngokuvamile ekushintsheni emaphandleni nasemadolobheni. Kodwa esekelwe izithombe kufanele sitshele ukuthi ungubani kazwelonke ke lubonakala ngaso sonke isikhathi, uma ehlala umuntu abahlala ngaphandle isikhathi nobukhulu nokuma kwezwe.
Oedipus eziyinkimbinkimbi kakhokho Freud esihlakaniphile
Uyini ukuphakama ISS? Emzileni ISS emhlabeni Umhlaba